Photoshop: dib ugu noqo waqtiga > Vielhuber David
Photoshop: dib ugu noqo waqtiga05
Markii ay walaalaha Thomas iyo John Knoll ay bilaabeen soo saarista Adobe Photoshop 1987, wali ma aanan dhalan. Maanta, sanadka 2013, softiweerku waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansan guud ahaan iyo hoggaamiyaha suuqa ee aan muran ka taagnayn ee farsamaynta sawirrada. Mahadsanidiin Adobe iyo Matxafka Taariikhda Kombuyuutarka, softiweerku hadda waxaa loo xafidi doonaa farcanka qaab aad u gaar ah.
Koodhka isha ee Photoshop 1.0.1 ayaa dhawaan loo sii daayay ujeedooyin aan ganacsi ahayn - khadadka 128,000, ka dib markii loo turjumay koodhka mashiinka, ayaa si dhib yar ugu habboon 3.5 "floppy disk" (1.44 MB) . In kasta oo la soo ururinayo koodhkii lagu qoray Pascal qalabka maanta (Mac) runtii way adag tahay, lambarku wuxuu leeyahay qiime weyn oo taariikhi ah
In kasta oo nuqulkii ugu horreeyay uusan taageerin lakabyada ama waddooyinka, haddana marka la barbardhigo nooca hadda jira ee Photoshop CS6 wuxuu muujinayaa waxa isku midka ah ee la yaabka leh ee weli la heli karo. Waxaa jira 25 sano inta udhaxeysa shaashadaha soo socda - taas ayaa ka dhigeysa wadnaha nostalgia inuu si dhaqso leh u garaaco! Xusuusnow isku shaandhayn ku dhow qalabka bidixda:
Sawir qaade 13.1.2 (CS6)